Horumarinta alaabta gaarka ah
Waxaan bixinaa xalal gaar ah iyo xalal horumarineed oo loogu talagalay alaabada dallacaadda wireless-ka, waxaanan ku dhameyn karnaa mashaariicda noocan oo kale ah dhowr bilood - waan ognahay inay muhiim tahay in laga jawaabo isbeddellada suuqa waqti gaaban.
Kooxdayada injineerada iyo naqshadeeyayaasha alaabada ee sida fiican isku xidhan waxay si joogto ah u horumariyaan oo ay ogaadaan xalal farsamo oo cusub oo cusub.Waxaan muhimad weyn saarna khibrada dhameystiran oo sii kordheysa, dabcan waxaan direynaa mashiino casri ah.
Qaar ka mid ah alaabooyinka aan u diyaarinay xalalka waa:
Xalka dallacaadda inductive
Dameeraha wireless-ka ee Desktop
Istaag xajiyeyaasha wireless-ka
Iyo xalal kale (gaar ah alaabada dallacaadda wireless-ka)
Dhammaan tayada badeecada si adag ayaa loo hirgeliyay si waafaqsan shuruudaha waxaana lagu gudbay imtixaan iyo qiimeyn heerar badan ah.
Geedi socodka waxaan ka qaadanaa fikrad ilaa taxane xal dhowr bilood gudahood.Waad ku mahadsan tahay maamulkayaga mashruuca habaysan, waxaan awoodnaa inaan sidoo kale si degdeg ah u fulino codsiyadaada.
Waxaan uga jawaabnaa si dabacsanaan ah macaamiishayada iyo dalabaadka suuqa.Ku biirista ciidamada Lantaisi sida lammaanahaaga waxay awood kuu siin doontaa inaad si hufan uga jawaabto horumarka suuqa.
Waxaan ku farxi doonaa inaan qabano u-qalmitaanka iyo ansaxinta ama isku-duubnida iyadoo la raacayo heerarka OEM.
Laga soo bilaabo fikrad ilaa xal ilaa wax soo saar waqti gaaban gudaheed
Nidaam-qeybiye ahaan, waxaan ilaalineynaa dhammaan tillaabooyinka loo baahan yahay.Nidaamku wuxuu ku bilaabmayaa qorsheynta mashruuca, soo-bandhigidda badeecada 2D, 3D qaab dhismeed, wuxuuna ku sii socdaa xaqiijinta iyo ansixinta ku salaysan shuruudaha OEM wuxuuna ku dhammaanayaa wax soo saar taxane ah.Dhammaan tillaabooyinka mashruuca go'aaminta tayada ayaa lagu dhammeeyey Lantaisi .
Iyadoo aan loo eegin haddii aad hore u leedahay fikrad la taaban karo ama fikrad aan caddayn - qorshaynta mashruucu waxay ku bilaabataa kulan faahfaahsan oo mashruuc ka hor ah.
Aqoonsiga (Naqshadaynta Warshadaha)
Injineerada nashqadeynta alaabada waxay sameeyaan soo bandhigida badeecada iyadoo ku saleysan fikradaha macaamiisha, tusi fikradaha naqshadeynta macaamiisha, u ogolow fikradahaaga inay qaabeeyaan.
EVT (Tijaabada Xaqiijinta Injineerka)
Ka dib markaad aqbasho muuqaalka lagu muujiyay bandhigyada alaabta, waxaanu samayn doonaa xaqiijinta naqshadaynta marxaladda hore ee horumarinta alaabta.Tan waxaa ku jira baaritaanka shaqeynta iyo badbaadada.Guud ahaan, RD (R&D) waxay qabataa xaqiijinta shaybaarada oo dhamaystiran waxayna qabataa tijaabooyin badan si loo hubiyo badbaadada alaabta.
DVT (Tijaabada Xaqiijinta Nakhshad)
Tijaabada xaqiijinta naqshadeynta waa isku xirka tijaabada lagama maarmaanka u ah wax soo saarka qalabka.Waxaanu samayn doonaa tijaabada caaryada, tijaabada waxqabadka elegtarooniga ah, iyo tijaabada muuqaalka.Ka dib markii la xalliyo dhibaatooyinka muunada ee marxaladda EVT, heerka iyo waqtiga dhammaan calaamadaha waa la tijaabiyaa, waxaana la dhammeeyaa imtixaanka badbaadada, kaas oo lagu xaqiijiyay RD iyo DQA (Hubinta Tayada Naqshadeynta).Waqtigan xaadirka ah, badeecada asal ahaan waa la dhammeeyey, waxaanan samayn doonaa caddaynta 3D waxaanan furi doonaa caaryada.
PVT (Tijaabada xaqiijinta ee tijaabada ah)
Marka macmiilku xaqiijiyo in aysan jirin wax dhib ah oo ku saabsan cabbirka iyo qaabka qaabka muunada, waxaanu samayn doonaa tijaabo tijaabo ah si loo xaqiijiyo xaqiijinta hawlaha sheyga cusub d iyo samaynta xasiloonida iyo imtixaanada kalsoonida.Natiijooyinka imtixaanku dhib ma laha oo shaybaarka waxa loo diri doonaa macmiilka.
MP (Wax soo saarka Mass)
Haddii aysan wax dhib ah ku qabin muunadda, waaxdayada wax-soo-saarka ayaa kuu samayn karta wax-soo-saar ballaaran wakhti kasta.Waxaan leenahay nidaamka silsilad sahayda dhamaystiran: maamulka isku dhafan ee aqoon-is-weydaarsiyada warshadaha, cilmi-baarista iyo qalabka horumarinta, qalabka wax soo saarka, bakhaar iyo gaadiidka.Waa himilada shirkadeena in ay macaamiishu ka dhigto kuwo aan walwal lahayn.